2021 Kaplan IT Review [$200 dhimis OFF]
2. Resource Comprehensive Most
4. Wararka smart
5. Free-Length Full DAT Practice Test
6. Kala duwan oo ka mid ah hababka waxbarasho
8. Guarantee Money-Back
9. Adeegga macaamiisha
Waa Maxay The Course Best Kaplan DAT?
Kaplan IT Book ($50):
Advantage IT - on Baahida ($1,250):
Advantage IT - meel kasta oo ($1,400):
Advantage IT - on Site (~ $ 1,400):
Tutoring DAT Private ($2,800-5,000):
Kaplan DAT Course Review burburka
Best Kaplan Coupon Codes & dhimis
The Kaplan DAT Prep Course waa mid ka mid ah koorsooyinka dib u eegis ugu caansan ee suuqa maanta. Kaplan ayaa gacanta ku warshadaha ee ilkaha Test Admission Dabcan dib u eegis iyo kasbatay si. Waxay bixiyaan mid ka mid ah koorsooyinka dib u eegis ugu dhamaystiran oo aan abid arko iyo in la siiyo dhowr ah oo kale oo ay adag tahay in ku garaacday faa'iidooyinka.
Anigu shakhsi ahaan loo isticmaalo oo ay dabcan markii aan qaatay DAT iyo aad buu ka faa'iideystey. Waxaan ka caajisay inuu jidka aad u badan ee fasalada undergraduate iyo ma lahayn jeeda sayniska xoog. Kaplan i siiyey aasaas u ah in aan loo baahan yahay si loo dhaliyo heer tartan on dhammaan qaybaha Baaritaanka Admission Ilkaha.
Haddaba waan tegi doonaa iyada oo qaar ka mid ah koorsooyinka dib u eegis kala duwan in Kaplan leeyahay in ay bixiyaan ka dib on, laakiin marka hore aynu eegno faa'iidada iyo khasaaraha waaweyn.
imtixaanada dhaqanka iyo thay waxaa lagu soo bandhigay qaab computer saxda ah isku aad arki doonaa maalinta imtixaanka aad, oo ay ku jiraan xadka waqtiga ku haboon, jebin siyaasadaha iyo xeerarka u dhaqaaqo iyada oo loo marayo content imtixaanka. Tani waxay aad familiarizes la format ku Test Admission ilkaha iyo waxay ka caawisaa dhiso kalsoonida si aad, wuu burburin doonaa maalinta imtixaanka dhabta ah ee aad.
Kaplan ayaa sheegay in ay leeyihiin "khayraadka ugu dhamaystiran" for DAT ah, iyo wixii aan soo arkay, ay sameeyaan. Kitaabkooda Review Notes la 800+ bogagga macluumaadka daboolayaa mawduuc kasta oo noqon doona on DAT ah. Buugani wuxuu kaa caawin doona inaad la dhiso aasaas adag qaybta kasta oo Baaritaanka Admission ilkaha iyo sidoo kale adeega sidii khayraadka wanaagsan faham dheeraad ah.
Iyadoo in ka badan 3,500 dhaqanka su'aalo iyo shan imtixaan dhererka buuxa, aad leedahay doonaa badan oo dhibaatooyin si ay u xalliyaan oo wax ka baro format ah in aad arki doonaa on DAT dhabta ah.
Wararka Smart ahaan imtixaan kasta dhaqanka aad qaado oo caawiya in la ogaado meelaha aad ugu liita iyo sida ugu wanaagsan ee ay ula qabsadaan aad diyaarinta si loo sare qaado tirooyinka aad. Waxay u falanqeeyaan qayb kasta oo baaritaanka nooca su'aasha iyo siiyaan falanqeyn dhameystiran qaab. Waxay kaloo ku talin doonaa shaqooyinka gaarka ah ee aad samayn lahaydeen oo si ay u yaqaaniin content iyo sare qaado tirooyinka aad. Your waxqabadka sii wadi doonaan in la qiimeeyo sida aad sii wadato diyaarinta.
Waxaad qori kartaa online in ay qaataan imtixaanka oo dhererkiisuna-full free dhaqanka DAT. Waxaan ku talinaynaa lahaa imtixaanka this free hor inta aanad bilaabin waxbarashada si aad u arki kartaa sida ugu wanaagsan ee aad samayn iyo in la garto waxa meelaha aad u baahan tahay in la hagaajiyo in. Inta badan waxa aad helaysaa in la hagaajiyo ee meel walba oo, laakiin aad ugu yaraan qaadan kartaa imtixaanka barbarashada ee si xor ah u leeyihiin saldhig ah in aad is barbardhigi kartaa ka dhanka ah.
Iyada oo noocyo kala duwan oo koorsooyin la heli karo, Kaplan waxay fursad ee nooc kasta oo bartaha inay tacliin qaataan hab iyaga u adeegaa ugu fiican; haddii in uu keligiis ka shaqeeya, dhigata fasalka, ama macalin gaar ah ka shaqeeya.
All of maaddadu ay Dulucda Kitaabka marka laga reebo, Dib u eeg buugga Notes iyo flashcards la heli karaa iyada oo loo marayo website Kaplan ayaa (buugaagta iyo flashcards yihiin nuqulo adag yihiin in lagugu soo diro). Ma loo baahan yahay in ay soo bixi software kasta si ay u isticmaalaan Kaplan, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay doonaa helaan fududahay in Dabcan dib u eegis aad meel kasta in ay jirto internetka. Waxaad haysan doontaa in ay helaan oo dhan ee aad content online for 120 maalmood laga bilaabo taariikhda bilowga aad.
Kaplan waa mid ka mid ah shirkadaha oo kaliya kaas oo bixiya a Daafaca lacag dammaanad. Halkan waxaa ku qoran shuruudaha ay:
Haddii aad dareento in aad diyaar u ah inay qaataan imtixaanka aadan, waxaad iyaga la baran kartaa mar kale xor ah oo taariikhda soo socda baaritaanka ama saddex bilood oo dheeraad ah oo baaritaan loogu computer-ku saleysan.
Macna ma laha inta dhibcood oo aad loo hagaajiyo, haddii aadan ka dhergiyey score guud ahaan aad, waxaad iyaga la baran kartaa mar kale xor ah oo taariikhda soo socda baaritaanka ama saddex bilood oo dheeraad ah oo baaritaan loogu computer-ku saleysan.
Haddii sabab kasta aadan kor u score guud ahaan aad, waxaad iyaga la baran kartaa mar kale bilaash ama lacag dib u hesho.
Halkan waxaa ku qoran shuruudaha xaq u yeelashada ah in loo baahan yahay in uu la kulmo si ay u helaan lacag ay dammaanad dib:
Step 1: Aad tahay arday Kaplan-markii ugu horeysay oo qoraan Dhibcaha Sare Balanqaad barnaamijka u qalma oo la bixiyo si buuxda.
Step 2: Waxaad ku dhameeyaan barnaamijka iyo imtixaanka rasmiga ah marka xiga waxaa maamula.
Step 3: saddex bilood dhamaystirka barnaamijka in gudahood, aad la wadaagto Kaplan score rasmiga ah una sheeg in aad rabto in aad ku celinayaa barnaamij la mid ah mid ka mid waqti dheeraad ah oo bilaash ah AMA haddii aadan dhalin ka sareeya imtixaanka rasmiga ah, aad rabto in aad lacag dib halkii.
Out of dhan oo ka mid ah shirkadaha diyaarinta DAT aan macaamilooteen, Kaplan ayaa qaar ka mid ah adeegga ugu fiican ee macaamiisha. Waxay had iyo jeer ahaa ixtiraam, wakhti iyo waxgarasho markii aan ku fallay iyagii oon. tayada adeegga macaamiisha waa mid muujisa ee shirkadda iyo wax soo saarka guud ahaan in my opinion. Waxaan oonu lahaa in shirkad tayo sidaan oo kale ah ku siin doonaa wax soo saarka oo tayo leh in aad ku kalsoon tahay kartaa.
Kaplan ayaa abuuray heshiis gaar ah loogu talagalay burburi akhristayaasha DAT. Hel $200 OFF koorso kasta oo Kaplan DAT show Coupon.
Waxaa jira qaladaad awdidu oo dhan wax Kaplan ah. Kasta hal mar ku nasta waxaa laga yaabaa in su'aasha ah in uu leeyahay jawaab jawaab sax ahayn, waayo, jawaabta saxda ah ama uu leeyahay khalad in su'aasha laftiisa. Si kastaba ha ahaatee, Ma tixgelin khaladaad kuwan badan oo la taaban karo ama ku filan si ay u kala duwan in aad diyaarinta. Ku dhawaad ​​wax kasta oo kale oo DAT dib u eegis suuqa maanta ayaa qaladaad awdidu.
Kaplan ku siin karaan aasaas adag for Baaritaanka Admission ilkaha oo kaa caawin kara inaad si loo gaaro 20+ Dhibcaha on dhammaan qaybaha DAT ah, si kastaba ha ahaatee, Waxaan dareemayaa in ay jiraan khayraadka kale ee soo baxay waxaa ay ahaan lahaayeen kuwo ka badan oo faa'iido u qaadista dhibcaha si aad u heerka ku xiga hal mar aad leedahay aasaas aasaasay aqoonta. Waxaan helay imtixaan dhererka buuxa Kaplan ayaa in ay xad la mid ah ama wax yar ka fududahay in DAT dhabta ah heerka ku adag tahay a.
Dhibcaha My DAT dhabta ah ay ahaayeen isku mid ah ama ka hooseeya si ay dhibcaha aan helo on imtixaanada dhaqanka Kaplan ahaa. Waxaan qabaa Kaplan ma shaqo weyn ee aad isku diyaarinaya DAT la waxyaabaha ay, si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho qaar ka mid ah qalabka waxbarasho dheeraad ah lagu daro Dabcan dib u eegis DAT Kaplan ayaa markaas aad si xaqiiqo ah waxay yeelan doonaan laayeen weyn ka dhanka ah dadka dhiggooda ah aad.
The Kaplan DAT Course waa mid ka mid ah koorsooyinka dib u eegis lagu helaa oo keliya in aad ku siin doonaa aasaaska loo dhan ku wareegsan adag DAT ah. Waxaa jira qaar ka mid ah koorsooyinka gaar ah in ay shaqo wanaagsan qabtaan baridda qaybaha qaar ka mid ah DAT ah, laakiinse iyagu ma ay yihiin koorsooyinka dhamaystiran in daboosho wax kasta on DAT sida Kaplan.
In kasta oo ay tahay qaali, qadarka qalab waxbarasho tayo leh oo qiimo aad u hesho la Kaplan weyn naefigooda, kharashka.
Kaplan waa ku weyn yahay, waayo, ardayga pre-ilkaha kasta, haddii aadan qaadan koorso college ku yaala 10 sano, ama haddii aad qabtid soo jeeda sayniska aad u xoog badan oo ay kaliya ku heysa inay barato su'aalo DAT iyo format imtixaanka.
Iyada oo ku xidhan marka aad style of waxbarashada, Kaplan kulmi karaan baahida kala duwan ee koorsooyinka dib u eegis ay bixisaa, si kastaba ha ahaatee, Waxaan dareemayaa in uu jiro hal Kaplan Dabcan waa doorashada ugu fiican ee dhammaan ardayda pre-ilkaha.
Me Qaado Si Kaplan DAT Review!
My doorasho noqon lahaa Advantage IT – on Baahida Dabcan oo waxaan ku talin lahaa in cid kasta oo dooneysa in ay u isticmaasho mid ka mid ah koorsooyinka Kaplan ayaa. Waxa aad ka heleysaa wax kasta oo aad ka heli lahayd ka baakadaha kale iyo waa kuwa ugu jaban.
buugga Review Notes The, yaryar oo badan, imtixaanka qaybta iyo imtixaanada dhererka buuxa in aad leedahay doonaa helaan ay noqon doontaa mid muhiim u ah in aad diyaarinta. Waxay kaa caawin doonaan inaad la dhiso aasaas iyo yaqaano for qayb kasta oo DAT ah oo aad u adeegtaan khayraad si loo eego in ay waxgarashada dheeraad ah iyo aqoonta.
Dhinaca kale oo kaliya loogu talo galay dadka jecel waxbarashada jawi fasalka live, tan iyo xirmo taasi ma bixiyaan waxbarid live. Waxaan jecel barashada la macallin in-qof, taas oo ah sababta aan ku qoran ee on-site Dabcan Kaplan. Waxaan ogaaday in aan helay aad u yar macluumaad dheeraad ah ka mid ah fadhiyada kuwaas oo hadda ay noqon lahaayeen sidii loo diyaariyey ayaa Anigu iyaga ma soo qayb galay.
macallimiinta ayaa laga yaabaa in ay leeyihiin qaar ka mid ah Talooyin iyo tabaha gaar ah ay tahay in ay kula wadaagi doonaa in fadhiyada live, taas oo uu noqon karaa waxtar leh, si kastaba ha ahaatee, talooyinkaas Kaplan iyo tabaha loogu talagalay DAT yihiin oo dhan waxaa ka mid ahaa kitaabkii cashar in la iman mid ka mid ah baakadaha ah. Ma loo baahan yahay in ay bixiyaan dheeraad ah macallin marka aad hayso macluumaad la mid ah aad heli karto in khayraadka doonaa si kasta lagu siiyaa.
Baadh All Kaplan DAT Review Koorsooyinka
Kaplan waxay bixisaa koorsooyin kala duwan dib u eegis kala duwan si loo daboolo baahiyaha iyo qaabkiisa waxbarasho oo dhan noocyada kala duwan ee ardayda pre-ilkaha. Halkan liiska koorsooyinkan ka yaraan in ugu qaalisan iyo waxa ay ka mid ah:
Tani-fiican iibinta waraaqa guide dib u eegis on Amazon waxay bixisaa tababarka iyo diyaarinta ardayda lala beegsaday si ay u weyneyno Admissions Ilkaha score Test. Buugani wuxuu ka kooban yahay socda:
Sayniska iyo Review tiro ahaaneed
Layliyo iyo ugu-to-date su'aalo for Baaritaanka Kartida garasho
1 Akhrinta Imtixaanka fahamka
xeeladaha imtixaanka wax ku ool ah si aan u weyneyno aad score
gooldhalinta waxbaridda midab cad ah iyo jaantus oo ay la socdaan sheet waxbarasho baxaan qaybta 16-bog
2 dhererka buuxa imtixaan DAT la sharaxaadda jawaab
Waxa kale oo aad marin u leedahay sifooyinka soo socda ka Kaplan la guide dib u eegista:
Free in ay imtixaanka oo dheeraad ah iyo ku dhaqanka dhererka buuxa helaan sayniska dheeraad ah mini-yaryar online
soo celiyo A buuxa ka Kaplan macaamiisha, kuwaas oo hana u kordhinnin dhibcaha imtixaanka ay isticmaasho ka dib kitaabkan
Hagaha dib u eegis Tani waxay noqon kartaa mid waxtar leh, laakiin ma siin doonaa su'aalo badan oo dhaqanka, imtixaanada iyo muuqaalada in kooxihii dib u eegis Kaplan bixiyaan. Tani waa qof in door oo keliya waxbarasho oo aan fariin kasta ama taageero ka macallin. Hagaha dib u eegis Tani waxay noqon kartaa halkan iibsaday.
Dabcan An online in aad siinaysaa in ay helaan siddeed casharo daboolaya fikradaha aasaasiga ah ee Chemistry Organic. Koorsadani waxay ku siinaysaa inaad hesho wax muddo saddex bilood ah oo kaliya.
Tani waa qof aan qaadi Organic Chemistry in dhowr sano oo uu u baahan yahay caawimo badan la. Anigu ma aan kula talin lahaa dabcan dib u eegista ay sabab u tahay sida ay qaali tahay iyo waxaan soo jeedin lahaa eegaya Chad ayaa Videos waayo, wax dib u eegis Chemistry.
Advantage IT – on Baahida ($1,250):
Dabcan An online in uu kuu helaan:
11 diiwaan videos edbinta
In ka badan 130 saacadood oo tababar iyo edbinta
In ka badan 3,500 waxyaabaha dhaqanka oo ay ku jiraan yaryar iyo imtixaanka qaybta
5 dhererka buuxa imtixaan DAT
Waxa kale oo aad heli doontaa qalabka dhamaystiran oo ay ku jiraan:
Kaplan DAT Book Dulucda
In ka badan 800 bogagga Review Notes
Kaplan ayaa Advantage DAT on Baahida Dabcan kuu ogolaanayaa inaad si ay u tagaan sida aad jeceshahay oo dhigay jadwalka adiga kuu gaar ah. Tani waa qofka in jecel yahay barashada iyo keli waxbarashada. Ma aha in fariin kasta ama taageero ka macalin la koorsadan Waxaad.
Advantage IT – meel kasta oo ($1,400):
11 ku nool, kalfadhi oo la qorsheeyay ee waxbarid
Live u helaan aad macallin iyo via email aad fasal dhan
Dabcan waxa uu ku siinayaa jadwal set of fasalo online iyo taageero toos ah ka Baraha internetka. Tani waa qofka in jecel yahay barashada iyo keli waxbarashada, weli inuu weli doonayo inuu fursad u taageero online ka macallin ka hesho haddii loo baahdo.
Advantage IT – on Site (~ $ 1,400):
Dabcan live A qaaday xarunta Kaplan ah in aad ku siin doonaa:
Waxaad sidoo kale yeelan doontaa online in ay helaan:
Dabcan waxa uu ku siinayaa jadwal set oo ah fasalada live xarunta Kaplan ah oo taageero toos ah ka macallin ee fasalka a. Tani waa qofka in uu door waxbarashada fasalka la joogo macallin.
Waxaad la barahaaga gaar ah u shaqayn doonaa – qof ahaan ama online – si ay u dhisaan barnaamij waxbarasho caado ku saleysan awoodaha shakhsi aad, daciifnimo iyo gool score. Barahaaga qabsato doonaa qorshahan sidii aad horumar dhex koorsada si kor loogu qaado wax ku ool waxbarashada iyo horumarinta waxqabadka.
Tirada waqtiga iyo qiimaha leh barahaaga gaar ah ka shaqeeya waa sida soo socota:
umeerin Private la macallin ka ah in aad ku siin doonaa:
koorsooyinka dib u eegis Kuwani dhaxayn $50-$5,000 qiimaha iyo halka ay ma yihiin cheap, ay kuu siiyaan habab kala duwan ee waxbarasho si ay u buuxiyaan baahida.
dib u eegis Tani waxay ku salaysan tahay off my waayo-aragnimo, cilmi iyo aqoonta Kaplan. Ogaaw in aad xor inuu ka hadlo i hoos ku qoran ama fariin la su'aal kasta oo aad qabto oo ku saabsan koorsooyinka dib u eegis Kaplan DAT!
Me Qaado Si Kaplans Website!
3. In ka badan 3,500 Practice Su'aalaha
5. -Dhererka Full DAT Practice Test
6. Guarantee Money Back